Kedu ihe bụ irradiance, olee otu esi atụ ya na ihe ọ bụ maka | Netwọk Mgbasa Ozi
Taa, anyị ga-ekwu maka ụdị mgbanwe dị ezigbo mkpa mgbe ị na-eguzobe ụdị ihu igwe na mpaghara ụfọdụ. Ọ bụ ihe gbasara irradiance. Irradiance bụ oke nke na-atụle ike kwa mpaghara nke ihe na-eme ka anwụ na-acha na mbara igwe. A na-atụle ogo radieshon a na-egbu elu n'elu oghere na oge akọwapụtara.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara irradiance na mkpa ịtọlite ​​ụdị ihu igwe.
2 Mmalite nke irradiance
3 Pesdị irradiance
Irradiance bụ oke nke na-enyere anyị aka ịlele ole radieshon nke anyanwụ dara n'elu ụfọdụ na n'oge ụfọdụ. Amaara na ọ bụghị anyanwụ radieshon niile nke anyanwụ na-ebute na mbara ụwa anyị. E gosipụtara irradiance na nkeji nke ike kwa mpaghara. Nọmalị ụkpụrụ na-kwuru na watts kwa square mita. Ọ bụrụ na anyị na-ezo aka na irradiance nke anyanwụ anyị ga-ekwu maka ọnụọgụ nke irradiance nke enyere elu na-anata kwa nkeji.
Iji maa atụ, anyị nwere ike ịsị na ikuku ụfụ dị n’otu ebe dị 10 watts kwa square mita na awa. Nke a pụtara na ọnụọgụ nke radieshon a na-adaba na otu square mita kwa awa. N'ụzọ dị otú a, anyị nwere ike ịmata ole radieshon nke otu akụkụ dị elu na-enweta oge iji gosipụta ụdị ihu igwe dị na mpaghara ụfọdụ.
Anyị maara na radieshon nke anyanwụ bụ mgbanwe dị mkpa maka uru nke okpomọkụ n'otu ebe. Ọ bụrụ na ebe a na-enweta nnukwu ọnụọgụ nke radieshon, ọ bụ ihe nkịtị na ọ nwere ọnọdụ dị elu karị. Tụkwasị na nke a, ụkpụrụ ndị a bụ ndị na-eguzobe ọchịchị ikuku na-achịkwa na ụfọdụ iheomume ikuku nke na-eweta mmiri ozuzo. Anyanwụ bụ igwe nke na - akpata ihe ikuku dị ka mmiri ozuzo na troposphere. Ọ bụ radieshon nke anyanwụ nke na-eme ka akụkụ nke mbara igwe dị ọkụ, na-eme ka ikuku dị gburugburu na-ekpo ọkụ ma na-agbago.
Na mpaghara ebe ikuku na-ebili, a ga-emepụta ụdị oghere nke ikuku ọzọ ga-ejupụta. Nke a bụ otu esi eguzobe ọchịchị ọchịchị ikuku. Ihe kariri ihe di iche netiti nkpuru ikuku, ikuku di uku. Na mgbakwunye, ndị a bụ ọnọdụ dị mma maka imepụta anticyclones na oké ifufe.
Mmalite nke irradiance
Site n'echiche nke teknụzụ, ụzarị anyanwụ n'elu ụwa bụ ụzọ nke ịgbakwunye oge etiti oge nke radieshon na-emetụta ihu elu nke ikuku nke ikuku. Ihe data nke irradiation nke anyanwụ na-enye anyị n’elu ala ga-adabere na oge nke afọ, latitude, ihu igwe n’ozuzu ya na oge nke ụbọchị anyị nọ na ya.
Igwe radieshon a na - esi n’okwute abịa. Ọ bụ ike sitere na mmeghachi omume nuklia na-eme mgbe niile n'ime anyanwụ. Nuklia nuklia a nke abuo hydrogen abuo jikotakoro iji gho ala helium. N'oge ngwakọta a nke atọm, a na-ewepụta nnukwu ike nke ana-ewepụta n'ụdị radieshon.
A ghaghi iburu n'uche na okpomoku nke mmeghachi omume a bu ihe kpatara anyanwu bu oke ihe nchacha nke na-eme oku nke ruru elu uwa. Anyi aghaghi iburu n’uche na mbara uwa anyi di n’ime ebe a maara dika “ebe obibi”. Ya bụ, ọ fọrọ nke nta ka anyanwụ kpoo anyị ọkụ, mana ọ ga-ezuru ya ịmụrụ anyị ọkụ.
Mpụga nke anyanwụ bụ ihe dịka 5500 Celsius. Kpakpando a na-eweputa oke ikuku nke electromagnetic na ogologo na ogologo. Igwe radieshon a sitere na ultraviolet ruo infrared, mpaghara a na-ahụ maka ụmụ mmadụ ka a na-akpọ egwurugwu. Thedị dị iche iche nke radieshon nke anyanwụ bụ nke na-emetụta ogologo oge niile anwụ na-acha, ma mmadụ ọ̀ na-ahụ ya.
E nwere ọtụtụ irradiance dabere na njirimara ha na mbido ha. Anyị ga-enyocha onye ọ bụla n'ime ha nzọụkwụ site na nzọụkwụ:
Ọnụ ọgụgụ nke irradiation anyanwụ: ọ bụ mmụba ahụ nke gụnyere ogologo nrịgo niile n'otu nkeji ga-emetụta ikuku nke mbara ụwa anyị. A na-atụkarị ya n'akụkụ n'akụkụ anyanwụ na-abanye na mbara igwe.
Dụ irradiance nkịtị: obu ya ka oji atule elu uwa n’otu ebe. Maka nke a, a na-eji ihe mmewere n'elu arụnyere n'akụkụ anyanwụ. Mkpokọta irradiance ga-adaba na irradiance extraterrestrial karịa ikuku, na-ewepu mmebi nke ikuku n'ihi nsị na mgbasa nke ọkụ site na ifufe na igwe ojii. Enwere ike ịbawanye ọghọm ndị a ma ọ bụ belata dabere na oge nke ụbọchị, latitude, mkpuchi igwe ojii, ọdịnaya mmiri, na ndị ọzọ.
Agbasa kwụ irradiance: a makwaara ya site na mgbasa mgbasa ozi igwe. Ọ bụ radieshon nke radieshon sitere n'ọkụ gbasasịrị na mbara igwe ruru ụwa. Enwere ike tụọ ọnụ ọgụgụ a n'elu ala na radieshon na-esite n'akụkụ niile dị na mbara igwe. Ọ bụrụ na ikuku adịghị, ọdịghị na ikuku ikuku ga-agbasa.
Mgbasa ihu igwe zuru ụwa ọnụ: N'ikpeazụ, ụdị irradiance a bụ ihe na-atụle radieshon zuru oke nke anyanwụ na ihu ala n'elu ụwa. Aguru ya dika nchikota nke irradiance na uzo mgbasa.
Ejiri ụkpụrụ ndị a niile iji mara njirimara ihu igwe nke otu mpaghara. Na mgbakwunye, a na-eji ya n'ọtụtụ ọmụmụ maka mmepe na iwupụta ume ọhụrụ nwere ike iji anyanwụ rụọ ọrụ. Ihe atụ nke a bụ fotovoltaic ike anyanwụ. Iji mezuo omumu ihe omumu nke ike nke foto nke fotovoltaic, odi nkpa ka amara oke nke radieshon nke ga emetuta elu ulo nke ulo n’ile. Tụkwasị na nke ahụ, a ga-achọ ụkpụrụ nke mgbanwe ndị ọzọ dị ka mkpuchi igwe ojii, iru mmiri na ikuku ikuku, n'etiti ndị ọzọ.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere irradiance.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Irradiance